I-Sachet Tomato Cola abaXhasi kunye neFektri - China I-Sachet Tomato Cola abavelisi
I-Hebei Tomato Ishishini Co., Ltd.
Ukuncamathelwa kwetamatato enkonkxiweyo
I-Sachet Tomato Cola
Cola i-Tomato Cola
Iitamatato ezinonkiweyo 210g
Iitamatisi ezinonkiweyo 70g (2)
Iitamatato ezinonkiweyo 70g
i-tomato unamathele 2200g
INKQUBO Brand 50g Sachet
“Ezona zinto zintle zenziwe zawenza owona mxholo!” Sinexabiso eliphezulu lolawulo kumngcelele wokwenza izinto kunye nokubonelela ngenkonzo ekumgangatho wokuqala kubathengi ngoncedo olomeleleyo lobuchwephesha. Sinqwenela ukwandisa iimarike ezininzi kunye nabahlobo abasehlabathini ukudala ikamva eliqaqambileyo ngesiseko sokuxhamla. Ukongeza kunkonkxiweyo wetamatato enkonkxiweyo, sinako nokukubonelela nge-sachet i-tomato unama, i-tomato yethu ine-Flat Sachet kunye ne-Standup Sachet. Ngobungakanani obahlukeneyo, singenza i-50g 56g 70g 100g njl.
I-70g yeSachet yeTamatato Cola (iFlat Bag)
I-Hebei Tomato Ishishini Co., Ltd. isungulwe ukusukela ngo-2007 e-Hebei, e-China, utyalo-mali iyonke yi-US $ 3.75 yezigidi, ezizodwa ekuqhubeni zonke iintlobo ze Catato Tomato Caste ne Sachet Tomato Cola.
Isampulu yeziqhamo zasimahla